USomnandi ukhala ngomfana omethukayo | News24
USomnandi ukhala ngomfana omethukayo
Durban – “Angifuni nakuyizwa ingoma yalo mfana ngoba ngizosuke ngimthathele izinyatshelo. Usezikhombisile ukuthi uyingane engahloniphi, ekhuliswe ngobuhlongandlebe ekhaya kubo”.
Lawa ngamazwi esihlabani sikamasikandi uThokozani “Somnandi” Langa odinwe uyaveva ngezinsolo zokuhlaselwa nguKhayelihle “Potso” Ngobese weqembu Amageza Amahle, kwi-albhamu yaleli qembu entsha ethi Inhlesa nenhlama, enezingoma ezinamagama aziswana okukholakala ukuthi abhekiswe kuSomnandi.
Ekhuluma neLANGA LeTheku uSomnandi ubengakwazi nokukhuluma ngenxa yentukuthelo, esho nokuthi ngeke yena adlale ingane (uPotso) ebukela phansi isithunzi sakhe.
USomnandi uthi ayikho ingxabano ephakathi kwakhe noPotso kodwa uyazi ukuthi uyasetshenziswa ngabathile abasemuva kwakhe abathi makalwe naye, aqhubeke lapho okwakugcine khona iNdidane.
OLUNYE UDABA: Uthi uphakathi komhlane nembeleko uSomnandi eMabala Noise
Utshele leli phephandaba ukuthi uPotso ubolile, ufana nesibozi esintanta phezulu esizibeni. Uthi yena ubazi ukuthi ulwa noMtshengiseni “iNdidane” Gcwensa, hhayi noPotso ngoba uyingane elingana nezingane zakhe azizalayo.
“Akaqhubeke engabe esama. Ungamthuka kanjani umuntu omdala engakaze asho lutho kuwena ekubeni uyingane? Lo mfana kumele engabe usacula izingoma zothando nokweshela izintombi ezizokhulisa izinsizwa emakhaya, zikhuthalele ukweshela,” esho.
Ethintwa uPotso uthe yena ngeke ashumayele acule izingoma zokholo, uma kukhona onenkinga “akahlabeke”.